कसरी बन्छ सर्पले टोकेको औषधि ? – Chakra Jwala
Posted in Health/wellness, Information/Guideline
कसरी बन्छ सर्पले टोकेको औषधि ?
Posted on2Oct 2016 31 Dec 2017 by Chakra Bhandari
नेपालमै औषधि उत्पादन गर्न सबैभन्दा पहिले सर्पको विष इन्जेक्सनमार्फत घोडामा पठाएपछि घोडाबाट निस्कने रगतबाट नै औषधि बनाउन सकिने सर्प विशेषज्ञ एवम् प्राविधिक प्रेम विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सर्पले टोक्ने बित्तिकै मान्छे मर्दैन । मान्छेको मृत्यु हुने कारण नै आत्तिएर हो ।औषधि बनाउन सर्पको विष र घोडाको रगत अनिवार्य चाहिने विष्टको भनाइ छ । ​
यदि सरकारले कानुन बनाएर सर्प पाल्न अनुमति दिए नेपालमा कोही पनि सर्पको टोकाइबाट मर्न नपर्ने विष्ट बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा प्रयोग भइरहेको सर्पदंशको औषधि पोलिभेनम हो भने विकसित राष्ट्रहरुले मोनोभेनम औषधि प्रयोग गर्छन् । फुयाँलले आफूहरुले पोलिभेनम र मोनोभेनम दुवै प्रकारका औषधि बनाउन चाहेको बताउनुभयो । नेपालमा कति प्रजातिका कति सर्प छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, जानकारका अनुसार तराईका महोत्तरीको बर्दिवास क्षेत्रमा धेरै सर्प पाइन्छ ।
विषालु सर्प गोमन र किङ कोब्रा मोरङको लेटाङ, टाँडी र दक्षिणी भेगमा पाइन्छ । संसारकै विषालु सर्पको रुपमा किङ कोब्रालाई लिइन्छ, यो लामो र ठूलो पनि हुन्छ ।
नेपालमै सर्पदंशको औषधि उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहनुभएका सर्पविद् लक्ष्मीप्रसाद फुयाँलले बताउनुभयो । ८८ करोड ६६ लाख लागतमा ‘एन्टिस्नेक भेनम सेरुम रिसर्च एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी’ स्थापना गरेर फुयाँलले सर्पको टोकाइबाट बच्ने औषधि नेपालमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । -रासस
Previous Post गुल्मेली सांसदलाई तम्घासबाट चिठी: गुल्मी कहिले सम्म अन्तिम स्टेशनका रुपमा रहिरहने ?
Next Post अब नेपालको पनि आफ्नै स्याटेलाइट
One thought on “कसरी बन्छ सर्पले टोकेको औषधि ?”